Antenimieram-pirenena: Volavolan-dalana efatra nolanian'ny depiote
vendredi, 26 octobre 2018 08:18
Notanterahina ny alarobioa 24 oktobra 2018 teto amin'ny Lapan'i Tsimbazaza ny fandanian'ireo Solombavambahoaka ireo volavolan-dalana miisa 04 izay mahakasika manokana ny fampindramam-bola an'i Madagasikara.
Ny Filohan'ny Antenimieram-pirenena mpisolo toerana, Harimampianina Andrianarivo, no nitarika ny fivoriana, notronon'ny Filoha Lefitra Helson Brisson Erafa.
1-Volavolan-dalana laharana faha 018/2018 tamin'ny 30 may 2018 mahakasika ny "Banque de l'Afrique Australe pour le Commerce et le Développement". Ahafahantsiaka manamora sy misitraka ny tombotsoa rehetra ao amin'ny COMESA amin'ny maha mpikambana feno antsika Malagasy ao, dia niditra ho isan'ny mpikambana ao amin'ny Banky (TBD) isika. Tombotsoa maro ny ho azontsika satria io Banky io dia afaka manohana tetik'asa, na ho an'ny Fanjakana na mpandrahara tsotra, afaka ihany koa mampindram-bola ho fampandehanana ny fifanakalozana ara-barotra ho an'ny mpandraharaha miakina amin'ny Fanjakana na tsia.
2-Volavolan-dalana laharana faha 022/2018 tamin'ny 01 jona 2018 mahakasika ny « accord du prêt relatif au financement de programme de formation professionnelle et d'amélioration de productivité agricole (FORMAPROD)». Ity Volavolan-dalana ity dia findramam-bola fanampiny ho fanatsarana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra, ary ihany koa fandrafetana ny paik'ady nasionaly iraisan'ny mpampiofana, satria tsapa fa samy manana ny fomba fanofanany ny miankina sy ny tsy miankina. Tanora miisa 41 000 no hisitraka ity fiofanana ity eran'i Madagasikara, fa Faritra 13 ihany no hisy ny ivo-toeram-piofanana. Ao aorinan'ny fiofanana dia mamoaka tanora vonona hiasa avy hatrany ny ivo-toeram-piofanana, ka io indrindra no ilaina izao findramam-bola fanampiny izao ho fanomezana "fonds de démarrage" ho azy ireo. Mitentina 5 680 000 dolara ny vola azo indramina ka 40 taona ny famerenana azy.
3-Volavolan-dalana laharana faha 023/2018 tamin'ny 23 oktobra 2018 mahakasika ny " accord de prêt relatif au financement du projet de Construction de centrales électriques hybrides photovoltaïque entre la République de Madagascar et le Gouvernement du Royaume de Belgique». Ny tanjon'izao Volavolan-dalana izao dia findramam-bola ho fanatsarana hatrany ny fanomezana angovo ho an'ny Firenena Malagasy iray manontolo. Mitentina 8 000 000 Euros ny fampindramam-bola vatsian'ny governemanta Belza izay haverina ao anatin'ny 30 taona ka ny 10 taona voalohany tsy andoavana zana-bola.
4-Volavolan-dalana laharana 025/2018 tamin'ny 26 jolay 2018 : ity lalàna ity dia mandrafitra ny lalàna mifehy sy manara-maso ny fomba fitantanana ireo Orin-draharaham-panjakana. Natao izao mba ho fanamasisana ny fanaraha-maso, ny tan-tsoroka ho an'ireo antokon-draharaham-panjakana, izany hoe iza no tena tokony omena subvention. Eo ihany koa ny fanaraha-maso sy fanatsara ny fitantanam-bolan'ny Orin-draharaham-panjakana.